Fiara amin'ny lamasinina miasa ao amin'ny Bosporus dia miverina | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulFiverenan'ny lamasinina miasa amin'ny Bosporus
Fiverenan'ny lamasinina miasa amin'ny Bosporus
22 / 01 / 2020 34 Istanbul, Railway, ANKAPOBENY, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
Ny fiaran-dalamby miverina miasa manomboka amin'ny taona miverina
'Ferry fiaran-dalamby', izay efa niasa tamin'ny fitaterana entana tamin'ny taona maro ary tsy niasa hatramin'ny 2013, dia hampiasaina indray. Ny ferry voalohany dia namboarina ary dia hiasa amin'ny 2020.
Ahoana no nandehanan'ireo sarety tamin'ny fiaran-dalamby nanomboka tany Sirkeci mankany Haydarpaşa taloha? Efa mba nieritreritra izany an'izany ve ianao? Sa ianao nahita ny ahoana? Miaraka amin'i Marmaray, izay nosokafana tamin'ny 2014, ny sarety fiaran-dalamby dia nentina teo anelanelan'ny kaontinanta roa mandra-pahatongan'ny lalamby anelanelan'ny Eropa sy ny kaontinanta Anatolianina.
Wallpaper NewspaperAraka ny vaovao tany Bengisu Kukul; “Indray mandeha, sarety entana no nentina nankany amin'ny Station Haydarpaşa avy amin'ny Sirkeci Station. Nisy lamasinina lamasinina momba an'io. Ny seranan-tsambo, izay nantsoin'ny mpitily mpanamory fiaramanidina antsoina hoe 'train ferry', dia niasa teo anelanelan'i Sirkeci sy Haydarpaşa nandritra ny taona maro.
Ny lalamby mankany amin'ny morontsiraka amin'ny seranan-tsambo amin'ny Sirgeci sy Haydarpaşa dia hiaraka amin'ny lamasinin'ny lamasinina. Eo amin'ny tsangambato haingam-pandeha sy ferry dia hivily mankany anaty lamasinina ny sarety. Rehefa tonga any amin'ny morontsiraka mifanohitra amin'ny morontsiraka ny sarety izay mitoetra amin'ny sisin'ny fiaran-dalamby, dia hikambana amin'ny lalamby izy ireo ary hanohy ny diany.
VAGONS NO MANGOTRA ANY DIDY FOLO ISTANBUL 1926
Ka inona izany no dikan'ilay onitra ireo? Ny tantaran'ireto ferida ireto, izay ilaina amin'ny fitohizan'ny fitaterana fiaran-dalamby eo anelanelan'ny kaontinanta roa, dia miverina amin'ny lasa taloha. Ny serivisy fiaramanidina voalohany teo anelanelan'ny roa sisin'i Istanbul dia nitranga tamin'ny 5 Oktobra 1926. Amin'ireo sary taloha dia hita fa ny fiara mandeha ranomasina dia mitondra fiaran-dalamby eo alohan'ny Haydarpaşa fa tsy fiaran-dalamby, fa sambo lehibe. Taorian'ny fitaterana lokomototra sy sarety vita tamin'ny talantalana misy fifandraisan'ny varotra, dia nanapa-kevitra ny hanangana sambo fiaran-dalamby sy Haydarpaşa sy Sirkeci hitondra ny fiaran-dalamby ao amin'ny Bosporus.
STEAM VOALOHANY LALANA MODERN: RAILWAY!
Ny sambo fiaran-dàlana maoderina voalohany tao Istanbul dia naorina tao Haliç Shipyard tamin'ny 1958 ary nomena anarana hoe Railway. Avy eo, tao anatin'ny rafitry ny fitomboan'ny filàna, namboarina ny Railway 1966 tany Haliç Shipyard tamin'ny 2. Ary tamin'ny taona 1982, ny sambo fiaran-dalamby fahatelo tao Haliç Shipyard dia naorina teo ambanin'ny anarana Railway 3 ary niditra ny serivisy. Ireo sambo fiaran-dalamby telo ireo dia nitondra sarety teo anelanelan'i Sirkeci Haydarpaşa nandritra ny taona maro. Avy eo, niaraka tamin'ny fanidiana ireo garan-dalamby teo amin'ireo morontsiraka roa ireo, nijanona koa ny serivisy fiaran-dalamby, ary nikatona ireo seranan-tsambo tamin'ny lamasinina nefa tsy niasa.
Manao ahoana ny fantsom-piaramanidina sy ny fitsangatsanganana misy azy ankehitriny?
Istanbul dia tanàna miova isan'andro, ary isika kosa miatrika ny tantara nandrehitra anay. Ilay sambo tamin'ny gara voalohany, ny Railway Ferry, dia nijanona ary namidy taorian'ny taona 2000. Ny lalamby fiaran-dalamby 2 sy 3, izay tsy niasa nandritra ny fotoana ela, dia hita ao amin'ny Port Port Haydarpaşa. Ny seranana izay manatona ny sambo amin'ny Sirkeci dia tsy dia ampiasaina intsony ankehitriny. Ny pijety ao Haydarpaşa dia mitovy. Manolotra anao fomba fijery tokana miaraka amin'ny lalany miakatra mankany amin'ny ranomasina ny serfa.
Voalohany indrindra, mandeha any amin'ny tranom-bakoka TCDD ao anatin'ny gara Sirkeci aho haka vaovao amin'ny antsipirihany momba ny fiaran-dalamby. Rehefa nilaza tamin'izy ireo ny mpiasa miasa ao amin'ny tranom-bakoka izy ireo fa te hahazo fampahalalana momba ny fiaramanidina lamasinina aho dia tarihin'izy ireo amin'ny talen'ny fitantanana ny seranan-tsambo Haydarpaşa.
Mety ho sarotra ihany ny raharaha rehefa mandeha any amin'ny seranan'i Port Haydarpaşa. Tena sarotra ny miditra amin'ny seranan-tsambo, izay raisina akaiky ny filaminana. Misaotra an'ireo nitarika ahy avy tany Sirkeci aho, afaka miditra amin'ny seranana. Voalohany indrindra, nihaona tamin'ny tompon'andraikitry ny serasera aho, İrfan Sarı. Nilaza izy fa ny fiaran-dalamby dia tsy ampiasaina intsony ary ny kapitenin'ny DOK, izay manam-pahalalana amin'io lafiny io, dia mitarika ahy ho lehiben'ny serivisy Rüştü Özkan.
TOROHEVITRA NY FIVORIANA MASINA
Rüştü Kaptan, 43, izay niasa tao amin'ny seranan'i Haydarpaşa nandritra ny 63 taona, dia manome antsika izao fampahalalana izao momba ny sambo: "Ny iray tamin'ireo sambo nandeha nohidiana hatramin'ny taona 1966 sy ny iray hafa hatramin'ny 1982. Ny lalamby tany Sirkeci sy Haydarpaşa dia tsy nanomboka hatrizay tamin'ny 2013. Miaraka amin'ny fanapahan-kevitra vaovao dia ho vonona amin'ny fandidiana mandra-pahatongan'ny volana martsa 2020 ary hiasa indray. Tamin'ny Janoary 2020, ny lamasinina dia nentina nankany Tuzla Shipyard hanaovana fanavaozana.
'TAMIN'i MARMARAY MITOMPOANA NY MPANOMPO'
Rehefa manontany momba ny maha-zava-dehibe ny lamasinin'ny lamasinina aho, dia nilaza izy fa zava-dehibe satria tsy misy vahaolana hafa, ary nanohy: Misy sariety enta-by milanja 10 taonina ho 90 taonina. Ankoatr'izay dia tsy azo atao ny mandalo ny fantsona mampidi-doza sy ny tafio-drizika amin'ny tavy. Ny sarety fiaran-dalamby dia mora kokoa amin'ny fitaterana satria manana sariety 12 sy 480 taonina mitondra entana izy ireo. Niasa 24 ora isan’andro izy rehefa manompo ary in-8-9 isan’andro. Mihena arakaraka ny fanondranana sy ny fanafarana ny fahasalaman'izy io. Noho ny haingam-pandeha ambony avy any Eropa ka hatrany Iran, ny isan'ny fiaran-dalamby dia nitombo ny telo tamin'ny fotoana. Mampihetsi-po fotsiny entana ny Iraka tsy Iran, araka ny Torkia, satria lalamby roa. Taorian'ny tetikasa Marmaray, sambo iray eo anelanelan'i Tekirdağ sy Derince, 187 metatra ny halavany, fiara 50 mahery no nanomboka nanompo. Noho izany, ny fiara fitaterana eo anelanelan'ny kaontinanta roa dia tsy voasakantsakana. ”Nilaza izy fa ny seranam-piaramanidina dia miasa eo anelanelan'i Van sy Tatvan ankehitriny. Mba hamelomana indray ny varotra iraisam-pirenena sy hitahiry ny lamba ara-tantara dia tokony havaozina sy hampiasaina indray ny serfa sy ny lamasinina.
Miverina any Balıkesir ny lamasinina mainty
Tendrin'i Marchandiz atao hoe Yhts dia niverina tany Ankara Station
İZBAN A.Ş. Nolavin'ny 13 miverina amin'ny asa machinistra
Fiarandalamby nokleary miverina
Mamindra ny Orient Express Express
Balıkesirere amin'ny filazantsara! .. Miverina ny lamasinina
Niverina tany Izmir ny sambo Sambo
Fanamarihana Tender: Maharitra ho an'ny fividianana unit 22 ho an'ny lamasinina
Fikirakira an'ny 22 ho an'ny fiarandalamby TCDD
Fampatsiahivana momba ny tolotra: Hahazo solika ny solika solika mba hividianana lamasinina
Fanamarihana momba ny asa: Hividy ny fitaovana ho an'ny Train Ferisi
Hanalefaka ny fifamoivoizana any Istanbul ny tontolon'ny làlambe ao Istanbul
Ny kodieri dia mitodika amin'ny lalamby Eoropeana
Metro 135 ambany ny Bosphorus!
Fankalazana ny taonjato faha-2 tao Bosphorus
Haydarpaşa Sirkeci Train Ferries
Torolàlana momba ny fandefasana amin'ny fandalinana rosiana